mushaGENERALYedikuyular Ski Centre Kugadzirira Kwegore
Yedikuyular Ski Centre Kugadzirira Kwegore
iyo nzvimbo yekutambira iri kugadzirira nguva yacho
Meya Güngör akataura kuti gadziriro yemwaka iri kuenderera kuYedikuyular Ski Center uye akawedzera kuti: yerine Panzvimbo yekuita zvisirizvo zvekudya uye zvinwiwa zvemukati munharaunda, isu tiri kuvaka dzimba dzekutengesa nyowani dzinozopa mabasa akanaka kune vashanyi vedu. Zvivakwa zvitsva zvinosimudzira nekutengesa zvigadzirwa zvemuguta redu. "Zvakanaka."
Kahramanmaraş Metropolitan Meya Hayrettin Güngör, TRT Çukurova Radio Yedikuyular Ski Center yakataura nezve nhepfenyuro mhenyu. Vachitaura kuti nzvimbo iyi yakakoshesa nzvimbo iyi, Güngör akati, "Nzvimbo yedu inowanikwa makiromita 15 kure pakati peguta. Vatinogara navo uye vashanyi vanouya kubva kunze kwedhorobha vanosvika kuimba yekutandarira vari chinhambwe che10 kubva pakati. Gore rakapfuura, takagamuchira zviuru zvevashanyi ve800 panzvimbo yedu. Isu tine chinangwa chekuwedzera nhamba iyi. ”
Meya Güngör akati, "Yedikuyular Ski Center yakagadzirirwa munzvimbo ye1,5 mativi emamirimita. Yakawedzerwa runways uye zvivakwa zvinosanganisirwa mune chirongwa. Tiri kushanda pane izvi. Vashanyi vedu vanobva kumaguta akavakidzana seGaziantep, Adiyaman, Sanliurfa, Hatay, Adana, Osmaniye uye Mersin vanoratidza kufarira nzvimbo yedu yeku ski. "Takatanga gadziriro yakakosha yemwaka mutsva kuti tisangane nechido ichi."
Kukoka kuSki Resort
Mayr Hayrettin Gungor, uyo akataura kuti nzvimbo inodyirwa nekudya uye zvinwiwa zvinokonzeresa kusvibiswa kwemifananidzo ichave yakaisvonaka, akati: ım Basa redu rinoenderera mberi nekukurumidza munzvimbo mune zvisikwa zvekudyira uye zvinwiwa zvematunhu mudunhu. Tiri kuvaka zvivakwa zvitsva umo vashanyi mudunhu vanosangana nezvavavanoda munzvimbo yakatekeshera uye zvigadzirwa zvemuno zveguta zvotengeswa. Zvikwata zvedu zviri kushanda nekukurumidza. Ndinovimba basa redu richange riri mukubatsira mumwaka mutsva. Ndinoda kukoka vanhu vatinogara navo pamwe nemaguta akavakidzana navo kuYedikuyular Ski Center mumwaka mutsva ”.
Yedikuyular Ski Centre Kugadzirira Kwegore 20 / 09 / 2017 Kahramanmaras Metropolitan Municipality Yedikuyu cheya-anosimudza Ski Center building, akadai anosimudza tambo pashure pakupera njanji fora remapazi akasima masts ari zvokuimba emuviri uye traction anoramba kushanda hurongwa. Nzira dzose dzenzira dzacho dzakapedzwa, ruzivo rwavo rwakapera. 1844 uye 2055 kutarisira zvivako, zvokudya zvekudya, zvigaro zvehupfumi zvakadai zvinopfuurira. Muna 3 1840 chimedu TRACK ANOVA Yedikuyular mita mukuru Ski Center kubva kuvakwa kwayo zvinoitwa pano achava the vachasimudza kuna the vachasimudza mutsetse danda mutsetse 8 10 posita 760 metres urefu, pamwe chete nechigadziko chechitima. Pachava nemitatu mitatu. Teleski runway yevatangi vekutanga ne8 kutengesa Tel
Yedikuyular Ski Centre Kugadzirira Kwegore 24 / 10 / 2017 Yedikuyu kuti kutanga kuvaka kubudikidza Municipality pamusoro Kahramanmaras zveBhaibheri Ski Center anoenderera mberi akurumidze. Kahramanmaras Metropolitan Municipality Studies uye Projects Department of Studies uye Projects Directorate kunopfuurira kweDzimba Yedikuyu kudzora Ski 1800-xnumx'l chakabatwa altitudes internet internet uye svikiro voltage zvemagetsi transformer rapera. administrative utariri uye muzinda chivako 2000 kukwira, maresitorendi, snowtruck (chando unorema muchina) vs zvivako, kuvakwa resitorendi zvivako 1844 kukwira mberi nokukurumidza. 2055 kukwidziridzwa kwegwagwa kunopedzwa. Mechanical systems zviri kugadzirwa. Rambo ruchazotangwa munguva pfupi. ZUVA ROSE 6 ZVINHU ZVOSE KACHAI Kahramanmaraş Metropolitan GÜN
Palandoken ski resort kugadzirira nguva yacho 19 / 11 / 2013 Palandöken the dzisina kugadzirira mwaka: Zvayaiva pakati guru state plesieroorde ari Turkey Palandöken Ski Center kugadzirira kuuya chando mwaka. Kwemwaka mutsva, Xenadu Snow White Hotel, paGomo rePalandöken, inomhanya nemiti yemapine uye inomhanya neC3 mhepo yepamusoro yezvikepe zveusiku husiku. Mhepo yegore inotanga kuvhurwa muvhiki yekutanga yaDecember nechando chekuya kwechando paPalandöken, uko anenge 4 mamiriyoni emadhora anoshandiswa uye basa re feverish riri kuitika. Muna 2011 uye Turkey akazarura makore maviri 'Best Sports Hotel' Xanadu Hotel Snow White akati vakagamuchira mubayiro nokuda Administrative Affairs Manager Omar Akca, "Last ...
Ergan Mountain Ski Resort iri Kugadzirira Gore 11 / 08 / 2014 Erkan Mountain Ski Resort Season Nokukurumidza Inogadzira Erzincan Gavhuna Abdurrahman Akdemir, Erkan Mountain Ski Center iri kuenderera mberi rokuvaka taongorora pamusoro mamiriro the mwaka kwegadziriro Zvimwe zvivako uye kugamuchira mashoko kubva machinda achicherechedza Erkan Mountain Ski Resort. Gavhuna Gavhuna Fatih Kaya uye vane hurumende vakakodzera vakapinda kuongororwa kwemafambi ekufamba, nzvimbo yakagadzirirwa kuva chando, 2. zuva kubatana chirimwa kuvakwa uye mapindu yaiva pakudzokorora inodzidza Gavhuna Abdurrahman Akdemir, achingoratidza kumhanyisa basa uye chirimo mwaka tichitarisa kupera kuti zvinofanira kufungwa zvakanaka, vakakurumidza akapedza nekuda kurima nguva vakaronga basa ...
Cıbıltepe Ski Centre iri kugadzirira nguva yacho 02 / 10 / 2014 Cibiltepe Ski Center kugadzirira mwaka: Turkey raMwari Sarikamish Cibiltepe Ski Centre ndeimwe anokosha ushanyi nzvimbo chando, chando mwaka iri makwara zvemaziso uye chirimwa nokugadzirira risina kumiswa. Pine masango rakamiswa pakati refu state mawere uye muna Cibiltepe inova imwe kufarira state nzvimbo pamwe ano kurwa state anosimudza, the pamusoro mawere pamberi mwaka apo rokuchenesa nokuputsa basa, Ukuwo akaita kugadzwa cheya chechina vachasimudza kupinda ichi chando basa. Sarıkamış Gavhuna Muhammad akasimba, AA akati mashoko kune venhau, pamusoro mawere ichi the mwaka kuti vawane basa nani kayaksever uye akaita zvokuimba chirimwa chitsva kukuru ...
Mota Dzinodzivirira Metrobus Tsaona yekutanga Yekunyevera System cak ichaiswa
ARUS Inomiririra Nyika Yedu kuFerroviara Rail Systems Fair
Cıbıltepe Ski Centre iri kugadzirira nguva itsva
Karacadağ Ski Center Inogadzirira Gore
Yedikuyular Ski Center Kugadzirira Nguva yechando
Mashoko akanaka kubva kuMeya Erkoç! .. Yedikuyular Ski Centre ichabatwa kusvikira panguva yacho